मुटु रोग किन लाग्छ ? यसका लक्षण र बच्ने उपाय | Nayashaktionline.com-No.1 News portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment,Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview, International News, Local News, Nepal News, All News, Total News, News, News of Nepal, Our Nepal, Every News, Bhaktapur, Kathmandu, Lalitpur All Nepalमुटु रोग किन लाग्छ ? यसका लक्षण र बच्ने उपाय
Home स्वास्थ्य मुटु रोग किन लाग्छ ? यसका लक्षण र बच्ने उपाय
सग्लो वा तन्दुरुस्त देखिएको व्यक्तिको अचानक मृत्यु हुन्छ । हामी सोध्छौं, ‘के भयो अचानक ?’
जवाफ अक्सर उस्तै हुनेगर्छ, ‘हार्ट अट्याक ।’ अर्थात हृदयघात । मुटुको कार्यसंचालनमा अप्रत्यासित अवरोध पुगेपछि यस्तो अवस्था आउँछ ।
मुटुरोग लाग्ने अनेकन कारण छन् । त्यसमध्ये अस्वस्थ्यकर जीवनशैली र तनाव पनि एक हो । पछिल्लो समय मुटु रोगी बढ्नुमा यही कारण मूख्य मानिएको छ । करियरको तनाव, पैसाको तनाव, घरजग्गाको तनाव, प्रतिष्ठाको तनाव अदिको घेराबन्दीमा परेको समाजमा मुटु रोगी बढ्दो छ ।
अझ दुखलाग्दो त के छ भने, तनाव कम गर्ने वाहानामा मद्यपान, धुमपान, निद्रा लाग्ने औषधी सेवन गर्ने गरिएको छ । यसले मुटुलाई सोझै असर गर्छ ।
मुटु रोगको जोखिम कम गर्नका लागि पनि सबैभन्दा पहिले आˆनो स्वास्थ्य प्रति सर्तकता अपनाउनै पर्छ । साथै, मुटुको रोगको लक्षणबारे जानकारी लिएर पनि मुटु रोगको जोखिम कम गर्न सकिन्छ ।
-मुटु सम्बन्धि कुनै रोग लागेमा सुरुवाती चरणमा व्यक्तिलाई वाकवाकी लाग्ने, छाती दुख्ने तथा पोल्ने, पेट पोल्ने तथा पाचन प्रकि्रया सम्बन्धि समस्या हुने गर्छ ।
-शरीरबाट अनायासै पसिना बग्नु पनि मुटु रोगको प्रमुख लक्षण हो । कुनै व्यक्तिलाई मुटु सम्बन्धि समस्या भएमा विना परिश्रम पनि शरीरबाट पसिना निस्कने गर्दछ ।
-कयौ पटक चक्कर आउनु तथा टाउको घुम्नु, बेहोस हुनु तथा थकान महसुस हुनु पनि मुटु रोगको संकेत हुनसक्दछ ।
वातावरणलाई स्वच्छ बनाउने अभियान चलाउन राष्ट्रपति भण्डारीको आह्वान